यस्तो छ बालेन शाहको गाउँ, पुर्खौली घर र सुन्दर परिवार । (हेर्नुस् भिडियो) – Ramailo Sandesh
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह निर्वाचित भएका छन्। बालेन शाह बिजयी भएसंगै युवाहरूको ठूलो जमात उनको समर्थनमा उत्रिएको छ। ३२ वर्षे शाहले उमेरले आफ्नो बाबु–आमा भन्न सुहाउने प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै मेयर पदमा निर्वाचित भएका हुन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा नेकपा एमालेबाट प्रतिस्पर्धा गरेको केशव स्थापित उमेरले ६३ वर्ष पुगेका छन् भने नेपाली कांग्रेसबाट महानगरपालिकाको मेयर पदमा प्रतिस्पर्धा गरेकी सिर्जना सिंह ५९ वर्षकी हुन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा विजयी हुँदै शाहले इतिहास रचेका हुन्।
सामाजिक सञ्जाल बालेनकै पक्षमा देखिन्छ। प्रायः राजनीतिक विषयमा चुप लाग्ने कलाकारहरू पनि बालेनको पक्षमा बोलेका छन्। उनीहरूले खुलेरै बालेनलाई भोट मागेका थिए।
को हुन् बालेन शाह ?
बालेन शाहको वास्तविक नाम बालेन्द्र शाह भए पनि उनी बालेन शाहको नामले परिचित छन्। १४ वैशाख २०४७ मा काठमाडौंको नरदेवीमा जन्मिएका उनी हाल गैरिगाउँ, तिनकुनेका स्थायी बासिन्दा हुन्।
आयुर्वेदिक चिकित्सक डा. राम नारायण शाह र धुव्रा देवी शाहका सन्तानका रुपमा जन्मिएका उनीको पुर्खाली थालो भने मधेश प्रदेशमा रहेको महोत्तरी जिल्ला हो। काठमाडौंको नरदेवीमा जन्मे-हुर्केका बालेन पेसाले इञ्जिनियर हुन्। उनका दाजु कुशल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट छन्। भाउजू बैंकमा काम गर्छिन्। बहिनी चित्रकार हुन्। बालेनकी श्रीमती सविना जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्छिन्।
बालेन सानैदेखि संगीततर्फ झुकाव राख्थे। स्याडोज ब्यान्डका गायक स्वप्नील शर्माका अनुसार बालेन राम्रो कविता लेख्छन्। काठमाडौंको भिएस निकेतन कलेजबाट प्लस-टु, खुमलटारको हिमालयन ह्वाइटहाउस इञ्जिनियरिङ कलेजबाट सिभिल इञ्जिनियरिङ गर्दा नै बालेन राजनीतिक अवस्था देखेर ‘फ्रस्टेट’ थिए।
शाहको प्रारम्भिक अध्धयन काठमाडौं नरदेवीमा रहेको जल्जला स्कूलबाट भएको हो भने स्कूलपछिको उच्च माध्यमिक तहको अध्ययन काठमाडौं तीनकुनेमा अवस्थित भिएस निकेतनबाट गरेका हुन्। उनको स्नातक तहको अध्ययन काठमाडौंमै रहेको हाइट हाउस कलेजबाट भएको थियो। त्यहाँ उनले सिभिल इन्जिनियरिङको अध्ययन गरेका थिए।
अध्ययनको क्रममा स्नाकोत्तरका लागि उनी भारत पुगेका थिए। भारत, कर्नाटकबाट उनले स्टकचरल इन्जिनिरिरिङको अध्ययन पूरा गरेका शाह विभिन्न निर्माणसम्बन्धी कार्यमा संलग्न रहँदै आएका छन्। उनी पेशाको क्रममा देशका ६५ जिल्ला पुगेको बताउँछन् । २०७२ सालको महाभूकम्पपछि उनले उद्धार र राहतको काममा सक्रिय भएर समाजसेवीको छवि पनि बनाए ।